Etu ị ga - esi mee ka saịtị Ecommerce gị pụta ìhè na Nchọgharị Nchọgharị | ECommerce ozi ọma
Etu ị ga - esi mee ka saịtị Ecommerce gị pụta ìhè na Njin ọchụchọ
Susana Maria Urbano Mateos | | Nkuzi na akuru
Nweta ezigbo ọkwa na Nsonaazụ ọchụchọ Google, ọ nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ. Agbanyeghị, ịnwere ike ịme saịtị gị A na-ahụ ihe azụmahịa anya na Nchọgharị Nchọgharị mmejuputa atumatu di nfe.
1 Debanye aha gị na saịtị na Google Search Console
2 Jikọọ saịtị gị na Google My Business
3 Jiri Google+ n'ụzọ ziri ezi
4 Jiri isiokwu dị mkpa
5 Mepụta backlinks na saịtị gị
Debanye aha gị na saịtị na Google Search Console
Ọrụ a na - enye gị ohere ibute websaịtị nke gị ma ọ bụrụ na Google nwere ike depụta ya. I nwekwara ike iji ngwá ọrụ a maka backlinks dị mkpa na ibe gị, chọpụta ma ọ bụrụ na ahụmịhe Google na-ejiri njehie webụsaịtị gị, ọbụlagodi ịgwa Google ma enwere nsụgharị dị iche iche nke saịtị gị maka mba dị iche iche.
Jikọọ saịtị gị na Google My Business
Mgbe ị na-edebanye aha gị ụlọ ọrụ dị na Google My Business, ị nwere ike ime ka ọ pụta na nsonaazụ ọchụchọ ala dị mkpa. Google mara na azụmaahịa gị na-arụ ọrụ na ọnọdụ anụ ahụ, nke pụtara na ị ga-enwe ohere ka mma ịpụta na nsonaazụ ọchụchọ yana na Google Maps.
Jiri Google+ n'ụzọ ziri ezi
Site na ịdenye ụlọ ọrụ gị na Google Business m, a na-enyekwa gị peeji Google+. Mgbe ị biputere njikọ gị na saịtị ma ọ bụ isiokwu blog na ibe Google+ gị, Google na-echepụta ya, yabụ na saịtị gị na-enweta ọhụhụ.
Jiri isiokwu dị mkpa
Ekwesịrị iji isiokwu ndị a na utu aha, nkowa meta, na url. Youkwesịrị iji nkọwa dị nkenke na nke ziri ezi nke ọdịnaya dị na ibe gị, yana isiokwu ndị ị na-atụ anya ga-arụ ọrụ nke ọma na ọchụchọ.
Mepụta backlinks na saịtị gị
na backlinks ha bụ nnabata njikọ sitere na saịtị ndị ọzọ na n'echiche dị mfe Google na-ewere ha dịka "votu" maka ọdịnaya nke saịtị gị. Akụkụ dị mkpa ebe a bụ ijide n'aka na ha bụ njikọ dị mma yana metụtara ọdịnaya saịtị ahụ.
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, ọ dị mkpa ịgbaso ndụmọdụ Google maka mmelite arụmọrụ, imewe weebụ, ikpo okwu ekwentị yana ojiji ziri ezi nke mgbasa ozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Etu ị ga - esi mee ka saịtị Ecommerce gị pụta ìhè na Njin ọchụchọ
Ihe ndị na - eme ka Ecommerce gị gaa n’ihu
Ihe ịma aka nke ịbanye na kọmputa na kọmputa (Ecommerce)